जब इन्स्टाग्रामले अब सक्रिय भन्छ 🥇 अनुयायीहरू ▷ says
नयाँ अद्यावधिकको साथ इन्स्टाग्राम कार्यान्वयन भएको छ, हामीले प्लेटफर्ममा सञ्चार र विकासमा सुधार गरेका केही सुविधाहरू देख्यौं। जब इन्स्टाग्राम अब सक्रिय भन्छ यो सामाजिक नेटवर्कमा एक व्यक्ति वा प्रयोगकर्ताको जडान स्थिति देखाउनको लागि हो। यसका लागि धन्यबाद, सञ्चार र अन्तर्क्रिया सुविधा पुर्‍याईएको छ, विशेष गरी जब प्रयोग गर्दै Instagram सिधा.
जब इन्स्टाग्राम अब सक्रिय भन्छ यो घोषणा गर्नु हो कि प्रयोगकर्ताले लग ईन गरेको छ। जहाँसम्म, तपाई यो पनि पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ कि यदि प्रयोगकर्ताले इन्स्टाग्राममा दिनको लग-इन भएको थियो, साथै उनीहरूको अन्तिम कनेक्शन पनि।
इन्स्टाग्रामले अब कहिले सक्रिय भन्छ?: यहाँ फेला पार्नुहोस्!
प्लेटफर्मको आधिकारिक ब्लगमा भर्खरको अपडेटमा, इन्स्टाग्रामले घोषणा गर्यो कि यसले प्रयोगकर्ताहरूलाई प्रयोगकर्ताको जडान स्थिति हेर्न अनुमति दिनेछ। त्यसो भए, यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ भने जब इन्स्टाग्राम अब सक्रिय भन्छ, तपाइँ संकेत गरिएको लेखमा पुग्नुभयो!
यो अपडेट थाहा पाउन जब इन्स्टाग्राम अब सक्रिय भन्छ यो प्राय: प्रत्यक्ष सन्देश शाखाको लागि सेवा दिनेछ, वा राम्रोसँग ईस्टाग्राम डाइरेक्टको रूपमा जानिन्छ। इन्स्टाग्राम डाइरेक्ट मार्फत तपाईं प्रयोगकर्ताहरू सक्रिय हुनुहुन्छ वा ती पत्ता लगाउन सक्षम हुनुहुनेछ वा, तपाईं तिनीहरूको अन्तिम जडान जान्न सक्नुहुनेछ।
अब, जान्नको लागि सब भन्दा सजिलो तरीकाहरू जब इन्स्टाग्राम अब सक्रिय भन्छ इन्स्टाग्राम डाइरेक्टमा जान र च्याट समीक्षा गर्नु हो, वा कुनै पनि केसमा प्रयोगकर्ताको प्रोफाइलमा जानुहोस्। प्रोफाइल चित्रको छेउमा प्रदर्शित हुने हरियो घेरा मार्फत तपाईले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि कुन प्रयोगकर्ता सक्रिय छ र कुन छैन। यो नोट गर्नु महत्वपूर्ण छ कि यो जानकारी केवल तपाईंले देख्नुहुने सम्पर्कहरूमा मात्र देखिन्छ वा तपाईंले पहिल्यै सम्पर्क गर्नुभयो।
यो नयाँ सुविधा लागू गर्दा प्लेटफर्मको मुख्य उद्देश्य भनेको यसको प्रयोगकर्ताहरूलाई वास्तविक समयमा कुराकानी गर्ने अवसर दिनु हो। यद्यपि धेरै इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरू यो नयाँ अपडेटसँग खुसी छैनन्।
यो असन्तुष्टि उत्पन्न भयो किनकि यो नयाँ सुविधाको कारण त्यहाँ प्रयोगकर्ताहरू छन् जसले उनीहरूको गोपनीयता गुमाएको महसुस गर्छन्। अर्कोतर्फ, यो सतर्क हुन केहि पनि छैन किनभने त्यहाँ एक विकल्प छ जुन तपाईंलाई यो सुविधा अक्षम गर्न अनुमति दिनेछ। यदि तपाईं अधिक जान्न चाहनुहुन्छ भने, यो लेख पढ्न जारी राख्नुहोस्।
नयाँ अपडेटले कसरी काम गर्दछ?
पहिले उल्लेख गरिए अनुसार जब इन्स्टाग्राम अब सक्रिय भन्छ यसको मतलव तपाई प्लेटफर्ममा उपलब्ध हुनुहुन्छ। यस नयाँ अपडेटको कार्य एकदम सरल छ, यो केवल तपाईंसँग इन्स्टाग्राम डाइरेक्ट मार्फत वा प्रोफाइलबाट भएको जडान स्थिति हेर्न सक्षम हुनु समावेश गर्दछ।
यसैले, धेरै महिनाको लागि इन्स्टाग्राम प्लेटफर्मले यो नयाँ प्रकार्य लागू गरेको छ, धेरैका लागि फाइदाजनक, अरुको विचारमा घुसपैठ गर्ने। यो सूचक फेसबुक मेसेन्जरमा र सामान्य रूपमा फेसबुक प्लेटफर्ममा प्रयोग हुनेसँग मिल्दोजुल्दो छ। यो धेरै सरल छ, तपाईले प्रोफाइल तस्वीरमा हरियो घेरा राख्नुपर्दछ भन्ने जान्नका लागि कि एक प्रयोगकर्ता इन्स्टाग्राममा जडित छ।
पहिले, इन्स्टाग्राममा तपाइँ केवल देख्न सक्नुहुनेछ जुन साधारण "सक्रिय अब" मार्फत कुन प्रयोगकर्ता जडित थियो। यद्यपि नयाँ अपडेटको साथ तपाई यसलाई प्रोफाईलमा हरियो डट वा सर्कलको माध्यमबाट हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको लागि धन्यबाद, अन्तरक्रिया र इन्स्टाग्राममा कुराकानीहरू अधिक तरल र वास्तविक समयमा हुन्।
तपाईं यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ कि यदि प्रयोगकर्ता दुबै सँग जोडिएको छ उनीहरूको दुबै सक्रिय प्रकार्य छ, र यदि ती व्यक्तिले तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा पछ्याउँदछ भने। त्यसकारण, व्यक्तिहरू तपाईले प्लेटफर्ममा अनुसरण गर्दा जब तपाईं जडित हुनुहुन्छ कल्पना गर्न सक्नुहुनेछ। जे होस्, त्यहाँ नियम को लागी एक अपवाद छ; यदि दुई व्यक्ति एक अर्कालाई पछ्याउँदैनन् भने, जबसम्म उनीहरू इन्स्टाग्राम डाइरेक्ट मार्फत सन्देशहरू साटासाट गर्छन्, उनीहरू तिनीहरूको कनेक्शन स्थिति हेर्न सक्छन्।
तपाईंको जडान स्थिति कसले देख्न सक्छ?
तपाईले अनुसरण गर्ने खाताहरू।
खाताहरू जुन तपाईं इन्स्टाग्राम डाइरेक्ट द्वारा अन्तर्क्रिया गर्नुभयो।
अब, यदि तपाईंले प्रकार्य निष्क्रिय गर्नुभयो भने तपाईंको कुनै पनि होइन अनुयायीहरू तिमिले देख्ननेछौ जब इन्स्टाग्राम अब सक्रिय भन्छ। त्यस्तै प्रकारले, ती व्यक्ति जसले यो नयाँ अपडेट निष्क्रिय गर्‍यो अन्य प्रयोगकर्ताहरूको जडान स्थिति पनि हेर्न सक्षम हुनेछैनन्।
यो उपयोगी छ जब इन्स्टाग्राम अब सक्रिय भन्छ?
विचार फरक छ। जहाँसम्म, धेरै प्रयोगकर्ताहरू सहमत छन् कि यो राम्रो समारोह हो अर्को प्रयोगकर्तालाई सम्पर्क गर्दा र हामी जान्न चाहन्छौं कि तिनीहरू कनेक्ट छन् कि छैन। यसले इन्स्टाग्राम वार्तालापमा प्रवाह र अन्तरक्रिया पनि सुधार गरेको छ।
अर्कोतर्फ, गोपनीयता कदर गर्नेहरू यो नयाँ सुविधाबाट धेरै खुसी छैनन्। यो किनभने नयाँ अपडेटले इन्स्टाग्राम प्लेटफर्म र यसको प्रयोगकर्ताहरूको गतिविधिहरूको गोपनीयता कम गर्दछ। त्यसकारण, इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरूको प्रतिशतले यो सुविधा अक्षम गर्न छनौट गर्यो।
भाग्यवस, यदि तपाईं यो नयाँ सुविधाको साथ धेरै सहज हुनुहुन्न भने, इन्स्टाग्रामले सजीलै असक्षम पार्न विकल्प प्रदान गर्दछ। यस तरीकाबाट, तपाईं जडित हुनुहुन्छ र प्लेटफर्ममा अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईंले सधैं गर्नुभयो।
इन्स्टाग्रामले अब कहिले सक्रिय भन्छ?: निष्क्रियता
Saber जब इन्स्टाग्राम अब सक्रिय भन्छ यो धेरै प्रयोगकर्ताहरूको लागि धेरै लाभदायक भएको छ जब अन्य व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने क्रममा। यद्यपि यो नयाँ अपडेट धेरैलाई मनपर्दैन। यो गोपनीयता मुद्दाहरूको कारणले हो, तपाईलाई पछ्याउने सबैले यो देख्न सक्नेछन् कि यदि तपाईं सक्रिय हुनुहुन्छ वा तपाईंको अन्तिम कनेक्शन।
त्यसकारण, यसको प्रयोगकर्ताहरूमा असन्तुष्टि र सन्देशमा प्रतिक्रिया दिनको दबाबबाट बच्न किनकि तपाईं उपलब्ध हुनुहुन्छ, इन्स्टाग्रामले यो प्रकार्य असक्षम पार्ने तरिकाको पनि सोच्न थाल्यो। हो, तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ, यो नयाँ अपडेट निष्क्रिय पार्ने सम्भावना छ। यो विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ कि एकचोटि तपाईंले यसलाई निस्क्रिय गर्नुभयो तपाईं आफ्नो सम्पर्कहरूको जडान स्थिति हेर्न सक्नुहुन्न।
तपाईंको जडान स्थिति वा तपाईंको प्रोफाइलमा हरियो सर्कल पूर्ण रूपमा निस्क्रिय गर्न, तपाईं विकल्पहरूमा जानु पर्छ। एक पटक "सेटिंग्स" मेनूमा, तपाईले "गोपनीयता र सुरक्षा" सेक्सन प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। यसमा तपाईले "गतिविधि वस्तुस्थिति" भन्ने विकल्प देख्नुहुनेछ, यही जहाँ तपाईले विकल्प देखाउनुहोस् "गतिविधि स्थिति देखाउनुहोस्" वा यो "च्याटमा गतिविधि देखाउनुहोस्" को रूपमा पनि देखा पर्न सक्छ।
एक पटक यी सबै निर्देशनहरू पूरा भए पछि, तपाईं एक साथीलाई जाँच गर्न वा तपाईंको लागि प्रमाणित गर्न सोध्न सक्नुहुनेछ यदि सक्रिय स्थिति तपाईंको प्रोफाइलमा प्रदर्शित हुँदैन भने। यदि हो भने, यो हो! अब तपाइँ इन्स्टाग्रामको मजा लिन सक्नुहुनेछ जस्तो गरी हुँदैहुन्छ।
"लेखन" सूचना: यो के हो?
अर्को नयाँ नवीनता जुन नयाँ अपडेटहरूको साथ आउँदछ, त्यो यो हो कि इन्स्टाग्राम निजी च्याटमा देखिन्छ जब तपाईं लेख्नुहुन्छ। यो प्रकार्य मेसेजिंग प्लेटफर्महरूमा स्थापना भएकोसँग मिल्दोजुल्दो छ जस्तै फेसबुक मेसेन्जर वा व्हाट्सएप। यो उल्लेख गर्नुपर्दछ कि भर्खरको अद्यावधिक अद्यावधिक हुनु अघि, इन्स्टाग्रामले मात्र देखायो जब तपाईं सन्देश पढ्नु भएको थियो।
अपरेशन एकदम सरल छ। यो क्षण तपाईं इन्स्टाग्राम डाइरेक्टटका माध्यमबाट च्याट प्रविष्ट गर्नुहुन्छ, र तपाईं सन्देशलाई जवाफ दिँदै हुनुहुन्छ; व्यक्तिले तपाईलाई के लेख्दै छ दृश्य गर्न सक्षम हुनेछ। यो तपाइँको प्रोफाइल तस्वीर को लागी देखा पर्नेछ। "लेखन" प्रदर्शनको प्रकार्यलाई निष्क्रिय गरीएको हुन सक्दछ र प्रोफाइलको "सक्रिय स्थिति" पनि।
कसरी समारोह निष्क्रिय गर्न?
यदि तपाईं लेख्नु भएको छ र कसैलाई अधिक गोपनीयता चाहिएको बेला कसैले कल्पना गर्न चाहनुहुन्न भने, तपाईंले तल दिइएका निर्देशनहरू पछ्याएर तपाईं यो समारोह निष्क्रिय पार्न सक्नुहुन्छ: तपाईंले इन्स्टाग्राम सेटिंग्समा जानुपर्नेछ, त्यसोभए तपाईंले "गतिविधि स्थिति" सेक्सन फेला पार्नुपर्नेछ। । त्यहाँ एक पटक, तपाईंले विकल्प खोज्नु पर्छ "कुराकानी गतिविधि देखाउनुहोस्" र यसलाई अक्षम गर्नुहोस्।
संकेतहरू धेरै वर्णन गरिएकोसँग मिल्दोजुल्दो छ यदि तपाईं आफ्नो प्रोफाइलको "सक्रिय स्थिति" निस्क्रिय गर्न चाहानुहुन्छ भने। यद्यपि यस अवस्थामा पनि यदि तपाईले प्रकार्यलाई निस्क्रिय गर्नुभयो भने कि अन्य व्यक्तिले तपाईले लेख्ने बेलामा देख्दैनन्; अर्को व्यक्ति वा प्रयोगकर्ता लेखिरहेको बेला तपाईले कल्पना गर्न जारी राख्न सक्नुहुन्छ, जब सम्म उहाँ यसलाई निस्क्रिय पार्नुहुन्न।
सूचनाहरू जब तपाइँ स्क्रीनशट लिनुहुन्छ?: यहाँ फेला पार्नुहोस्!
हामीले माथि वर्णन गरेका सबै अद्यावधिकहरू बाहेक, इन्स्टाग्रामले स्क्रीनशटहरूको लागि चेतावनी प्रणालीको परीक्षण पनि गरिरहेको छ। यदि अघिल्लो व्यक्तिहरूले धेरै जसो इन्स्टाग्राम प्रयोगकर्ताहरूमा असन्तुष्टता देखाएमा, यो कल्पना गर्नुहोस्! र, इन्स्टाग्रामले आफ्ना प्रयोगकर्ताहरूबाट बढि गोपनीयता लिइरहेको छ।
अब, त्यहाँ एक शुभ समाचार छ र यो अझै कार्यान्वयन भएको छैन। जहाँसम्म, यदि यो वास्तविकतामा परिणत हुन्छ भने, तपाईं अन्य विकल्पहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको मोबाइल उपकरणको अपरेटि operating प्रणालीमा निर्भर रहँदै, त्यहाँ धेरै उपकरणहरू छन् जुन तपाईंलाई अन्य प्रयोगकर्ताहरूका कथा डाउनलोड गर्न मद्दत गर्दछ, यो फोटो वा भिडियोहरू होस्।
विभिन्न मोबाइल अनुप्रयोगहरूका लागि धन्यबाद, इन्स्टाग्राम कथाहरू डाउनलोड गर्न सम्भव छ। एन्ड्रोइड फोनहरूको मामलामा तपाईं प्रसिद्ध इस्टिगमेन्ट स्टोरी सेभर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ इन्स्टाग्राम अनुप्रयोगको लागि, यो पूर्ण नि: शुल्क हो र 100% सुरक्षित छ। एकचोटि डाउनलोड भएपछि तपाईले यसलाई आफ्नो इन्स्टाग्राम डेटामार्फत पहुँच गर्नुपर्नेछ र कथा डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ जुन डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ।
अब, आईओएस अपरेटिंग प्रणालीको मामलामा, वा आईफोनमा, प्रक्रिया थोरै फरक हुन्छ। तपाईले गर्नु पर्ने पहिलो कुरा भनेको तपाईको ब्राउजरमा जानुहोस् र चिनियाँ अनुप्रयोग स्टोर खोज्नुहोस् जुन टुटुअप्प भनिन्छ। एकचोटि तपाईंले यो फेला पार्नुभयो भने, तपाईंले नि: शुल्क संस्करण डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। साथै, यो डाउनलोड भए पछि तपाईले आफ्नो उपकरणमा आवश्यक अनुमतिहरू प्रदान गर्नु पर्नेछ र तपाई पसलमा जानु पर्नेछ र "इन्स्टाग्राम ++" डाउनलोड गर्नुपर्नेछ।
एप्लिकेसन डाउनलोड भएपछि, तपाईले यसलाई आफ्नो इन्स्टाग्राम प्रमाणहरू प्रयोग गरेर मात्र पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। एकचोटी तपाईले यो गरिसकेपछि तपाईले डाउनलोड गर्न चाहानु भएको कथामा जानु पर्छ र भोला! एक सरल र छिटो तरिकामा।
कसले तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा पछ्याउँदैन